Zimbaabween namticha uffata ‘ekeraan’ nama saamu to'annoo jala oolchite | ETHIOPIANS TODAY
Zimbaabween namticha uffata ‘ekeraan’ nama saamu to’annoo jala oolchite
May 28, 2021 Ekeraa
Zimbaabween kutaa Kibba biyyattii Guutuu jedhamu keessatti namticha uffannaa ’ekeraa’ fakkaatu uffatee namoota sodaachisuun saamuun shakkame to’achuu miidiyaan biyyattii gabaase.
Dubbii himaan Poolisii biyyattii Paul Nyathi, namtichi maqaan isaa Normaan Chagwiza jedhamu manneen lama saamuu mirkanaa’eera jedhan.
Ekeraa fakkaatee namoota sodaachisuun, namoonni wayita baqatan qabeenyasaanii saamaa turuu ibsameera.
Normaan Chagwiza dargaggeessa ganna 27 yoo ta’u, himannaa irratti dhiyaate kanarratti yaadasaa hin kennine jedhameera.
The Ethiopian army is clearing the region by destroying Al-Shabaab and thwarting its terrorist target